DISADISAM-PIARAHAMONINA TAO AMBATO BOENY : Olona miisa 2 naratra mafy, iray maty
Ny zoma lasa teo tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany antoandro tany ho any no raikitra ny fifandonana teo amin’ny mponina miisa telo, mipetraka ao amin’ny Fokontany Antsenavao Kaominina Andranomamy Distrikan’Ambato Boeny. 10 février 2019
Nisahotaka ny fokonolona tao an-toerana nanoloana ny zava-niseho no sady tsy nisy nahalala izay tena fototry ny ady. Raha ny tatitra voaray, omaly teo am-panoratana ny lahatsoratra dia samy naratra mafy avokoa izy telo ireo noho ny fifampikasihan-tanana sy fampiasana zava-maranitra. Niezaka nanasaraka azy ireo ny mponina saingy nananosarotra izany ka tsy maintsy nampandre haingana ny mpitandro filaminana nandamina ny raharaha. Ny zandary avy ao amin’ny Borigadin’ Andranomamy no tonga haingana nisahana izany.
Efa samy vaky ra avokoa ireto mpifanandrina ary tsy nahazaka tena intsony. Ny iray tamin’izy ireo no fantatra fa nindaosin’ny fahafatesana satria voaporofo fa voakapoka tamin’ny famaky ny lamosiny, feno mangana ny vatany iray manontolo, hany ka maty tsy tra-drano teo noho eo ihany ity farany. Ireo roa hafa kosa nalefa nitsabo tena ao amin’ny CsbII ao an-toerana. Aorian’izay dia hatao famotorana izy ireo alohan’ny hiakaran’ny raharaha eny anivon’ny Fitsarana. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ity Faritra ity indray dia mangataka fiaraha-miasa amin’ny mponina ireo zandary mba hanome loharanom-baovao marim-pototra raha sendra ka mahita trangan-javatra hafahafa mampiahiahy.